छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नीति कति व्यवहारिक ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २९ जेठ, २०७६ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएकाे छ । किनभने महिनावारी भएकाे समयमा धेरै छात्रा विद्यालय जादैनन् ।
महिनावारी हुँदा विभिन्न समस्या हुने भएकाले छात्राहरु नियमित विद्यालय नजाने तथा बीचमै पढाइ छाड्ने गरेकाे शिक्षा विभागका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए । उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न तथा पढाइलाई नियमित गराउन देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन लागेकाे शर्माले बताए । ”धेरै छात्राहरुले महिनावारी भएकाे समयमा विद्यालय जादैनन् । यसले उनीहरुकाे पढाइमा असर पुग्ने गरेकाे छ” उनले भने, ”छात्राहरुलाई नियमित बनाउनका लागि अपनाउने विभिन्न उपायमध्ये याे पनि एक हाे ।”
मुलुकमा रहेका ११ हजार ९ सय ४९ सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहकाे पढाइ हुन्छ । जसमा करीब सात लाख छात्राहरु अध्ययनरत रहेकाे विभागकाे तथ्यांक छ । विद्यालयमा टिकाइराख्न सरकारले सेनेटरी प्याड नि:शुल्क वितरण गर्ने नीति ल्याए पनि केहीले भने यसकाे आलाेचना गरेका छन् । सरकारले ल्याएकाे नीति व्यवहारिक नभएकाे जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीकाे टिप्पणी छ । उनी भन्छिन्, ”याे नीति लागू हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । किनभने यतिधेरै विद्यार्थी छन् । सबैलाई कहिलेसम्म सरकारले बाँढेर सक्छ ।”
सरकारकाे याे नीतिले धेरै छात्रालाई विद्यालय जान प्राेत्साहन मिल्छ । तर यसकाे सुरुवातसँगै निरन्तरता भने चुनाैतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने सरकारले कुन क्षेत्रका किशाेरीले कसरी महिनावारीलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयकाे पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
Tagged छात्रा महिनावारी सामुदायिक विद्यालय सेनेटरी प्याड
Tags: छात्रा, महिनावारी, सामुदायिक विद्यालय, सेनेटरी प्याड